Sida loo sameeyo kalandarka | Hal-abuurka Online
Mar kasta oo sannadku bilaabmayo, ama mar kasta oo aan bilawno mashruuc, ogaanshaha sida loo sameeyo jadwalka ayaa noqon kara mid ka mid ah hawlaha caadiga ah ee aan fulino.
Kalandarka ma aha oo kaliya kan derbiga ku dheggan ama kan noo ogolaanaya inaan gacanta ku hayno (ama kan mobilka) laakiin wuxuu noo ogolaanayaa inaan qorno taariikhaha muhiimka ah, faahfaahinta ay tahay in la tixgeliyo maalin kasta, iwm. Taasna uma baahnid inaad lacagta ku iibsatid mid. Waxaad samayn kartaa kaaga
1 Waa maxay sababta jadwalka taariikhda loo sameeyo
2 Maxay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad samaynayso jadwal
3 Kalandarka ku samee Word
4 Kalandarka Excel ku samee
5 Bogagga internetka si aad u sameysid jadwal qurxin
Waa maxay sababta jadwalka taariikhda loo sameeyo
Ka soo qaad inaad iskaa u shaqeysato oo aad la shaqeyso macaamiisha maalin kasta. Waxaad haysataa dhowr oo waxaad ka shaqeysaa dhammaantood. Laakiin taariikhda keenista, shirarka, iwm. mid walba wuu ka duwan yahay. Oo sidoo kale waxaad jeceshahay inaad ilaaliso amarka oo aad ogaato waxaad samaynayso maalin kasta.
Haddii aad taas ku qorto buug xusuus-qor ah, waxay u badan tahay inaad ku dambayn doonto taariikho si aad u go'aamiso waxaad samaynayso maalin kasta. Laakiin waa buug xusuus qor ah.
Hadda ka fikir inaad sidaas oo kale samayso, oo keliya a Jadwalka aad adigu abuurtay, kaas oo noqon kara toddobaadle, bille ama sannadle iyo in maalin kasta uu haysto qoraallada macmiil kasta si uu u ogaado waxaad samaynayso. Tan waxa la dul dhigi karaa miiskaaga, laadlaad, iwm. Miyaanay noqonayn muuqaal badan?
Buug xusuus-qor ah, ama warqad aad wax walba ku qorto, ama xitaa ajande, waxay noqon kartaa qalab wanaagsan. Laakiin kalandarka ayaa noqon doona Waxay kuu ogolaaneysaa inaad la xiriirto taariikhaha hawlaha iyo muuqaal ahaan waxaad arki doontaa si ka wanaagsan inta shaqo ee aad haysatid waxa la sameeyo iyada oo ku xidhan maalinta. Ama haddii aad leedahay dhakhaatiir, ballamaha macmiilka, iwm.
Maxay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad samaynayso jadwal
Samaynta jadwalku waa mid ka mid ah hawlaha ugu fudud ee aad samayn karto hal-abuur ahaan. Waa hagaag, dhab ahaantii, waa mid ka mid ah kuwa ugu fudud laakiin, iyadoo ku xiran dhadhankaaga iyo hal-abuurka aad rabto inaad siiso, waxay noqon kartaa wax ka badan ama ka yar.
Asal ahaan samaynta kalandarka waxay u baahan tahay kaliya qalab, sida Word, Excel, Photoshop, bogag online ah... iyo in gacanta lagu hayo kalandarka (kaasoo noqon kara kombayutarka ama telefoonka gacanta) si uu kuugu hago taariikhaha.
Tusaale ahaan, qiyaas inaad rabto inaad sameyso kalandarka Janaayo. Waa inaad ogaataa maalinta mid kasta oo iyaga ka mid ahi uu dhacayo si aad ugu turjunto dukumeentigaaga oo aad awoodo inaad daabacdo.
Dhinac, iyo Ikhtiyaar ahaan, waxaad dooran kartaa sawirro, emojis, sawirro, iwm. taasi waxay ka dhigi doontaa jadwalka laftiisa mid muuqaal ah.
Laakiin taas oo keliya ayaad ku shaqayn kartaa.
Kalandarka ku samee Word
Aan ku bilowno jadwal fudud. Waxaad ku samayn kartaa Word ama barnaamij kale oo la mid ah (OpenOffice, LibreOffice ...). Maxaa lagaa rabaa?
Fur dukumeenti cusub. Waxaan kugula talineynaa inaad bogga si toos ah u dhigtid haddii aad si toos ah u sameyso, haddii aysan ahayn hal usbuuc kaliya, uma ekaan doonto mid wanaagsan oo waxaad yeelan doontaa boos yar.
Markaad si toos ah u haysato, waa inaad miis samee. Tiirarka waa inaad gelisaa 7 iyo saf, haddii ay tahay hal bil, 4 ama 5. Haddii aad rabto kaliya usbuucaas, ka dibna hal kaliya. Laba haddii aad rabto inaad dhigto maalmaha toddobaadka (Isniinta ilaa Axadda ama Isniinta ilaa Jimcaha (haddii ay taasi noqon doonto 5 tiir)).
Looxa wuxuu ka soo bixi doonaa caato, laakiin tani waa meesha aad awoodid ku ciyaar booska bannaan ee u dhexeeya unugyada si aad u kala fogayso dhammaantood. Maxaa loo balaadhiyey? Hagaag, sababtoo ah waxaad u baahan tahay meesha aad ku tilmaamto. Ma aha oo kaliya inaad dhigayso lambarada maalin kasta, laakiin sidoo kale waxaad ka tagi doontaa meel aad wax ku qorto, tusaale ahaan, la kulanka macmiilka, safar nasasho ah, waxa ay tahay inaad sameyso maalin kasta, iwm.
Waxa ugu fiican ee jadwalkan waa in hal bil ay buuxsato bogga oo dhan, markaa waxaad hubisaa inaad si fiican u caddahay dhammaan hawlaha aad u baahan tahay inaad qabato. Qaar, iyada oo ujeedadu tahay in aysan sameynin bilo kala duwan, waxa ay qabtaan waa in ay ka tagaan meel bannaan oo ay u isticmaalaan qaab-dhismeedka. Yacni, tirooyinka ma dhigaan, ee waxay ka tagaan miiska oo madhan, si, marka la daabaco, ay u dhigaan oo ay u isticmaalaan isla bilaha kala duwan.
Iyada oo barnaamijkan Waxaad dhigi kartaa sawirro laakiin waxaad xaddidan tahay marka loo eego daawadooda ama goobta saxda ah ee ay ku yaalliin.
Haddii ay dhacdo in aad rabto in aad haysatid jadwal dhammaystiran oo bilaha oo dhan ah, waxaan kugula talineynaa inaad sameysid miisaska bil kasta, si dhamaadka ay dhammaantood ugu habboon yihiin xaashi isku mid ah. Dhibaatadu waxay tahay inaadan haysan meel aad wax ku qorto.
Kalandarka Excel ku samee
Barnaamij kale oo aad isticmaali karto si aad u sameysid jadwal waa Excel. Waxay u shaqeysaa si ficil ahaan la mid ah sida Word, laakiin qaab ahaan aad ayey uga fududdahay sababtoo ah waxaad horey u samaysay miiska.
Gaar ah, marka aad furto Excel, waxa kaliya ee lagaa rabo waa in aad geliso maalmaha (Isniin ilaa Jimce ama Isniin ilaa Axad) oo qaado 4-5 saf.
Markaad farta ku fiiqdo, u gudub qaybta bidix, halkaas oo nambarka safku ka muuqdo, oo guji badhanka midigta ee jiirka. Halkaa, dooro dhererka safka oo dhig fogaanta aad rabto safafkaas (waxay ku siin doontaa meel ka badan ama ka yar). Waa muhiim in aanan dhaafin hal bog (taasi ayaa kuu sheegi doonta isla marka aad sameyso dulmar).
Intaa waxaa dheer, xagga sare ee tiirarka, oo lagu tiriyaa xarfaha A ilaa infinity, waxaad dooran kartaa kuwa aad rabto (5 ama 7), dhagsii badhanka midigta ee jiirka oo raadi ballaca tiirka si aad sidoo kale u siiso meel ka badan ama ka yar.
Marka aad dhammayso, kaliya waa inaad daabacdaa.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka tagto maalmaha toddobaadka sida qiimaha caadiga ah. Sidan ayay u fiicnaan doontaa.
Haddii waxa aad rabto inaad sameyso ay tahay kalandarka sanadlaha ah, markaa waa inaad ku shaqeysaa miisas kala duwan. Waxay ku jiri kartaa isla xaashi, kaliya in bil kasta ay yaraan doonto si ay ugu habboonaato qaabka aad rabto inaad haysato ama daabacdo.
Bogagga internetka si aad u sameysid jadwal qurxin
Haddii aadan rabin inaad sameyso miisas, dhig boosaska... maxaad u isticmaali weyday qaab online ah? Waxaa jira bogag badan iyo qalab online ah oo lagu sameeyo jadwalka taariikhda. Dhab ahaantii, waxaad samayn kartaa hal bil, saddex bilood, ama kalandarka sanadlaha ah adoon u baahnayn in ay ka shaqeeyaan wax badan on design sababtoo ah waxay iman doonaan horay-nakhshad iyo diyaar u ah in aad u habeeyo xoogaa ah waana taas.
Algunas de las boggaga aan ku talineyno Waxay yihiin:
Dabcan sidoo kale waad awoodi kartaa dooro inaad ku samayso Photoshop, GIMP ama barnaamij kasta oo sawir tafatirka ah. Waxay qaadan doontaa wax yar ka dheer, laakiin waxaad u habeyn kartaa ilaa ugu badnaan.
Caadi ahaan ma samaysaa jadwal bil kasta? Hadda ma ku dhiiratay inaad mid samayso?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Sida loo sameeyo kalandarka